"नोवोरोसीस्क-Sevastopol" - यात्री नौका छैन गन्तव्य हो
सबै हाल राजनीतिक घटनाहरूका समयमा भयो पछि जस्तै क्षेत्रमा प्रयोग गर्न धेरै लोकप्रिय बनेका छन् सिम्फरोपोल, क्रास्नोडार, सोची, Sevastopol, नोवोरोसीस्क, Sevastopol। नौका, यात्रु को यातायात को लागि अभिप्रेरित, खुला Kerch पार देखि "काकेशस" पोर्ट र विपरित यातायात वहन। तर के अन्य मार्गहरू बारेमा?
यो नोवोरोसीस्क-Sevastopol रूपमा यस्तो निर्देशन बारेमा कुरा गर्न लायक छ। बाटो मा नौका हालै हिंडे। तर नियमित रूपमा दुई शहर बीच संचार। छोटो, सबै कुरा मा - को क्रिमीआ अब क्रास्नोडार क्षेत्र संग सम्बन्धित छ भन्ने तथ्यलाई मात्र होइन एक साधारण इतिहास, संस्कृति, परम्परा, आदि, तर पनि उत्पादन, मोटर वाहन, फर्नीचर, उपकरण को एक आपूर्ति छ। किनभने 2014 को अन्त देखि, वर्ष पानी परिवहन नोवोरोसीस्क-Sevastopol को दिशा मा हिंड्न थाल्नुभयो। डुङ्गा ठूलो छ, आधुनिक - सजिलो यातायात प्रदान गर्दछ। नयाँ पार को प्रतिनिधि को कार्गो र जहाज प्रति महिना (एक र अन्य दिशा मा दुवै) दस उडानहरू वहन बताए। यो एउटा सानो प्रतिशत लाग्न सक्छ, तर यो दूरी बारेमा उहाँ सम्झनुहुन्छ लायक छ - यो बरु ठूलो छ।
तसर्थ, कार्गो नौका "नोवोरोसीस्क-Sevastopol" लगभग एक सय ट्रक डिजाइन! हरेक जहाज जस्तै को घमण्ड सक्छ - यो एक महान सूचक हो। को वाष्प बाटो वरिपरि 18-20 घण्टा छ - मौसम आधारमा। जहाज ओसारपसार गर्ने सवारी साधन चालक, यो एक दिन आराम र पोषण तीन पटक यस समयमा प्रस्तावित छ। अझै धेरै नौका "नोवोरोसीस्क-Sevastopol" को लागत मा रुचि छन्। एक गाडी को यातायात 26.700 rubles खर्च हुनेछ। यो, खैर, एकदम वफादार मूल्य। सोही, यो एउटा कुरा टिप्पण लायक छ: नौका पूर्णतया लोड गरिएको छैन भने, त्यसपछि यसलाई ढिलाइ हुन सक्छ पठाउनुहोस्।
म माथि उल्लेख रूपमा, "नोवोरोसीस्क-Sevastopol" - जो सिर्फ एक वाहन, र प्रायद्वीप सुनिश्चित अर्को तरिका छैन बाफ, सबै आवश्यक पूर्ण जीवन को लागि त्यहाँका बासिन्दाहरूले छ। यो यस कारण लागि, यो धेरै बढी यस्ता जहाजहरु सुरु गर्न योजना छ छ। तिनीहरूले थप विशाल हुन आवश्यक छ। क्षणमा गुजर जो नौका "सेन्ट पीटर्सबर्ग", 95 ट्रक, अन्य को यो सूचक accommodates भने, ठूलो जहाजहरु 140 waggons बराबर हुनुपर्छ। को पानीजहाज प्रत्येक एक हप्ताको दुई रन लागि के गर्न हुनेछ। कुल यो 10 हुनेछैन, र प्रति महिना 40 उडानहरू! तसर्थ, पानीजहाज प्रत्येक दुवै क्रिमीआ देखि मुख्य भूमि र फिर्ता कार्गो ओसारपसार हुनेछ। र क्षणमा - मुख्य कार्य हो।
यात्री परिवहन - तर, धेरै मानिसहरू बाफ को नोवोरोसीस्क-Sevastopol निर्देशन, उद्देश्य जो मा हिड्ने कि, रुचि राख्नुहुन्छ। क्षणमा, यो विचार पनि विकास अन्तर्गत छ। अहिलेसम्म त्यहाँ Kerch नौका मार्फत नोवोरोसीस्क मा हुन सक्छ - तपाईं Novorossiisk गर्न Sevastopol को दिशा मा एउटा टिकट किन्न मात्र आवश्यक त, र सडक हिट गर्न सक्नुहुन्छ नौका मात्र आधा घण्टा जान्छ। माथिको छलफल भएको थियो जो कार्गो जहाज, खैर, त्यसैले लामो छैन - गो बस (मा एक नौका समयमा आधारित) बारे 8 घण्टा छ।
जहाँ संग पाल (फोटो) उपनगरहरुमा आराम गर्न?
Essentuki मा अस्पताल "डन" - अस्पताल मिया रूस
Arcy: व्यक्तिगत इतिहास संग ट्रांसफर्मर
बुर्सा (टर्की) - तुर्क साम्राज्य को सांस्कृतिक र वास्तुकला सम्पदा एक खजाना trove
अभिनेता "उत्कृष्ट चार।" "उत्कृष्ट चार": प्लट, फिल्म विशेषताहरु
Atrophic pharyngitis: कारणहरू र उपचार
एक घर वा अपार्टमेन्ट मा एक कोठा कसरी सजाउनु गर्न
कसरी "Photoshop" पाठ सजाने